WOWOW Burushka Qolka Musqusha ee Dahabka ah 4 inch Musqusha Musqusha 3 Hole RV Qolka Musqusha ee Sink 2 Qabsada Faa'iido Faa'iido leh oo leh Xarumo Bullaacadeed oo Bullaacad ah
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW Waranjiye Dahabka Musqusha Dahabka 4 inch 3 Hoolka RV Musqulaha 2 Hole RV Musqulaha Musqusha ee Sink 360 Qabsada Faa'iido Faa'iido leh oo leh Xarumo Bullaacadeed oo Bullaacad ah
Gacan labajibaaran oo bir ah oo qurux badan si ay ugu fududaato shaqada iyo xakameynta heerkulka.
Qalabka faleebada dhoobada ayaa ka sarreeya heerarka cimri dhererka warshadaha, hubinta waxqabadka cimriga dheer
4 Inch Saddex-god ah Ku rakib: Waxay la timaadaa bullaacadaha, khadadka bixinta biyaha kulul iyo kuwa qabow ee cUPC iyo galoofyada, baakadaha oo dhameystiran, iyo si sahlan loo rakibo.
Retro & Basin Basin qasab: Dahab, diirran oo raaxo leh, kuu samee musqul wanaagsan oo qurux badan. Dhamaadka cadayga ayaa kaa caawin kara inaad iska caabbido daxalka iyo miridhku nolol maalmeedka.
Easy To Use: Wareeg 360-degree ah, naqshad farshaxan sare leh, waxay kordhin kartaa aagga nadaafadda, waxay kuu sahlaysaa nolol maalmeedkaaga. Tuubbada musqusha ee laba-qabsi waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u xakameyso heerkulka kulul iyo qabow
Tayo sare leh qiimaha: Lugaha naxaasta iyo dhismaha oo hubiya cimri dherer iyo isku hallayn; Kaydadka dhoobada dhoobada aan lahayn Qulqulka qasabadda qasabadda ee laga sameeyay aerator ABS ayaa kaa caawin kara inaad keydiso biyaha. (Daawadahan si toos ah gacmahaaga ayaa hoos loogu soo qaadan karaa si aad u nadiifiso)
Adeegga macaamiisha: 5-sano oo dammaanad xaddidan ah iyo taageerada macaamiisha ayaa la siiyaa. Waxaa daboolaya soo noqoshada 90-maalmood. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: Dahab dahab ah, Gacanta Labaad